Ny lokon'ny fandriam-pahalemana ao amin'ny Colosseum any Roma - ny volana martsa
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Ny lokon'ny fandriampahalemana ao amin'ny Kolosiana any Roma
14 / 09 / 2019 ny Antonio Gancedo
Fampirantiana lehibe indrindra manerantany ho fankalazana ny "Andro iraisam-pirenen'ny Firenena Mikambana"
Misimisy kokoa avy amin'ny sary ataon'ny 5000 ho an'ny fandriam-pahaleman'ny ankizy avy amin'ny firenena 126 hita ao amin'ny Colosseum
5.000 Sarin'ny fandriam-pahalemana nataon'ireo ankizy avy amin'ny firenena 126, anisan'izany i Italia, dia naseho tao amin'ny Colosseum any Roma nanomboka tamin'ny 20 ka 29 tamin'ny volana septambra 2019.
Ao amin'ny Colosseum, mariky ny fiantsoana ny hetsika fandriampahalemana sy fahatsiarovan-tena
Ny sehatra mandrakizay ao amin'ny Colosseum, izay efa nanjary mariky ny fiantsoana ny hetsika fandriampahalemana sy fahatsiarovan-tena, dia handray ireo nofinofin'ireo zanaky ny tontolo milamina voarakitra an-tsary izay naseho manodidina ny tsangambato . Ny loko miloko ao amin'ny andiany fahatelo dia mamaly ny antson'ny Firenena Mikambana izay voaresaka ao anaty fanapahan-kevitra A / RES / 36 / 67, izay manasa ireo andrim-panjakana sy fiarahamonim-pirenena hankalazan'ny andro iraisam-pirenena fiadanana (ny «Andro iraisam-pirenena» nankalazaina tamin'ny volana septambra 21).
Ny taratasy dia nakana ireo mpianatra nandray anjara tamin'ny Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run Peace Race ary ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa hafa. Ny Colours of Peace dia fandaharana nokarakarain'i Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, fikambanana tsy mitady tombony azo aorin'i Sri Chinmoy any New York ao amin'ny 1987.
Hisokatra amin'ny lanonana iray ao amin'ny kianjan'ny Colosseum izany
Ny loko milamina 2019 dia hisokatra amin'ny 16: 30 ny 20 septambra misy lanonana ao amin'ny Arena Coliseum. Ireo mpianatra, solontenan'ny andrim-panjakana, solontena avy any ivelany, ny solontenan'ny Corps diplomatic, ny solontenan'ireo antokom-pivavahana isan-karazany sy ny toetra manokana avy amin'ny tontolon'ny kolontsaina sy fanatanjahantena dia handray anjara amin'ny hetsika.
Mandritra ny lanonana dia natolotra ireo mpankafy ny "Peace Movie Award 2019", fifaninanana iraisam-pirenena natolotry ny 2017 avy amin'ny Peace Run dia atolotra eo ambany fiahian'ny minisitry ny fampianarana, ny oniversite ary ny fikarohana ary ny ministeran'ny raharaha ara-kolotsaina sy ny hetsika ary fizahan-tany.
Ny fifaninanana dia mikendry ny hampiroborobo ny kolontsaina fandriam-pahalemana amin'ny fanasana ny ankizy sy ny tanora avy amin'ny sekoly manerana an'izao tontolo izao haneho ny fahitany ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny horonantsary 32 segondra. Homenao sekoly iray any Bosnia sy Herzegovina ary sekoly any Indonezia ny loka amin'ity taona ity.
Notohanan'ny ambaratonga ofisialy samihafa
Amin'ireo fanontana samihafa dia ny Colors of Peace dia nahazo ny fanohanan'ny Filohan'ny Antenimieram-pirenena, ny Chamber of Deputies an'ny Repoblika italiana, ao amin'ny Fiadidiana ny sampana mitovy amin'ny filankevitry ny minisitra, ao amin'ny minisiteran'ny fampianarana, ny oniversite ary ny fikarohana, Minisiteran'ny lova sy ny kolontsaina ary ny fikambanana media RAI Gulp.
Ny hetsika dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny Archaeological Park of the Colosseum, ny Association "Colors for Peace" an'i Santa Ana de Stazzema ary ny fandraisana anjara amin'ny Roma Capitale.
Ny valim-pitiavana dia manome valisoa amin'ny volana martsa ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fahatoniana
Ny hetsika dia hatolotra amin'ny mpanao gazety amin'ny alarobia, septambra 18 amin'ny 15: ora 00 ao amin'ny foiben'ny Fikambanana Geografika italiana, Palazzetto Mattei any Villa Celimontana, Via della Navicella, 12, 00184 Roma RM.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, Rafael De La Rubia dia handray ny fanilo ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny hazakazaka milamina izay hitarika amin'ny fihaonambe manerantany momba ny loka Nobel izay ho tanterahina manomboka amin'ny 19 ka hatramin'ny septambra 22 any Mérida, Meksika: homena anao ny tsilo fiandohan'ny Peace ianao. ny hazakazan'ny fandriampahalemana.
Ao ny lahatsoratra tany am-boalohany Pressenza International Press Agency
Fanehoan-kevitra 1 amin'ny "Colours of Peace di Colosseum any Roma"
Pingback: Ny lokon'ny zavakanto dia miloko amin'ny fomba filaharana - The World March